Ukulawulwa Kwemfucuza Kufamu Yezingulube
Nakuba i-pig slurry ingenye yezingozi ezisongela kakhulu epulazini lezingulube, lingasetshenziswa ukuthuthukisa inzuzo yepulazi ngokuyisebenzisa njengomanyolo, umquba noma ukukhiqiza amandla. Into yokuqala yokucubungula ngisho nangaphambi kokuqala ingulube yezimvu, indlela okuzoqoqwa ngayo ama-slurry noma umquba. Epulazini elincane lapho izingulube zivunyelwe ukuhamba ngaphandle, umquba kufanele ususwe njalo ukuvimbela ukwakhiwa kwezifo nokungcola. Umquba ungasuswa ngendlela efanele, nge-spade.
Ukukhipha imishini kunzima kakhulu ngezinhlelo eziqinile lapho izingulube zikhiqizwa ezindlini. Ngakho-ke izindlu eziningi zanamuhla zenzelwe ukuba zitshalwe kancane kancane zivumela ukuba i-slurry igijime emgodini wokugcina noma idamu.
Esikhathini esedlule, bekujwayele ukuthi kulungile ukuqoqa ama-slurry ebhodini lomhlabathi, kodwa lezi zinsuku zokugcina amamitha kufanele zihlanganiswe, ngokomthetho, ukuvimbela ukungcola kwamanzi. Amadamu angeke abe khona eduze kwezikhukhula ze-floodplains noma i-vleiland, angenawo amancane noma izindawo zokungena ezikhungweni zamanzi ezivunguvungu.
Ngokwencwadi kaDanie Visser's Modern Pig Production, abalimi ngokuvamile bahlukanisa iziqhumane ezimanzi bese basebenzisa uketshezi njengomanyolo, ngokusakazela ezitshalweni ezithile noma emadlelweni. Ukuze uvimbele ukwedlula ukukhulelwa kanye nokugijima, imiqulu esetshenzisiwe ishintshwe ngokuvumelana nezidingo zomsoco zesitshalo. Amasampula omhlabathi nawo athathwa njalo ngonyaka ukuze abone ukungalingani kokudla okunempilo futhi alungise lezi ngaphambi kokuba aphume.
Buza isazi sensimu ngaphambi kokuba uqale lokhu, ukukusiza ukuthi ubone ukuthi yini enomsoco we-slurry futhi ikusize ukuthuthukisa uhlelo lokufaka umquba.
Ama-solid solids angasetshenziswa njengomthombo we-nitrojeni kumquba. Ukuvumela umquba ukuba wakhe ukushisa okwanele kuzosiza ukubhubhisa izifo eziphilayo eziyingozi. Inqwaba yomquba kufanele igcinwe enomanzi, kodwa ingabi manzi, ukusheshisa ukubola futhi iguqulwe njalo noma ifakwe amandla ukuze kuqinisekiswe ukuthi kukhona oksijini okwanele ekuthuthukiseni izinhlobonhlobo eziphilayo. Isikhathi esithathayo sokuba umquba ulungele ukusetshenziswa ensimini, kuzoxhomekeka ezimweni zezulu, izithako zokuquba kanye nendlela okuphethwe ngayo umquba.
Umquba olungele ukusetshenziswa uzoba iphunga lomhlaba. Uma iphunga kabi, noma ibeke, kukhona okungahambi kahle ngakho. (Funda okwengeziwe mayelana nokwenza umquba).
I-bio-digester ingasetshenziselwa ukuguqula i-slurry ibe yi-biogas, engasetshenziselwa ukupheka, nokuguqula i-biogas ibe ngamandla ashisayo, isibonelo kwamanzi kanye nemvula, kanye negesi, engasetshenziswa ukunciphisa ugesi wase-epulazini izindleko noma ukuthengiswa emuva kumgridi wezwe kazwelonke.
Imikhakha ephezulu ye-slurry iyadingeka ukukhiqiza ugesi, ngakho abalimi kudingeka balinganise inani lezingulube zabo ezikhiqiza inyanga ngayinye yonyaka ukuqinisekisa ukuthi kuyoba nokunikezwa okuqhubekayo unyaka wonke. Izindleko ziqhutshwa uma umlimi ethatha isinqumo sokugcina amandla epulazini, ngokusebenzisa amabhethri.